Apple mizara horonantsary vaovao momba ny hoe ahoana ny fandraisam-peo amin'ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Apple mizara horonantsary vaovao momba ny hoe ahoana ny fandraisam-peo amin'ny iPad Pro
Nandritra ny fampisehoana farany an'ny iPad Pro dia nanitrikitrika indray i Tim Cook fa ity fitaovana ity dia mety indrindra hanoloana solosaina, zavatra iray izay nahatonga fahanginana mahatsikaiky ho an'i Cook sy ny mpijery. Mialà amin'ny fisisihan'i Cook amin'ity lafiny ity, ny mazava dia ny isan-taona, ny taranaka vaovao dia manana teboka bebe kokoa hahatratrarana azy.
Herinandro vitsivitsy lasa izay, Apple dia nandefa horonantsary fampiroboroboana vaovao ho an'ny iPad Pro ao amin'ny tranokalan'ny YouTube, horonan-tsary izay mampiseho amintsika izay azontsika atao sy tsy azontsika atao amin'ity fitaovana ity. Ankehitriny dia anjaran'ny horonantsary hafa, maharitra ela kokoa, izay anehoana azy ny fomba nanoratana ireo horonantsary ireo tamin'ny alàlan'ny iPad Pro.
Fa tsy amin'ny fandraketana ihany, fa amin'ny fanovana azy ihany koa, amin'ny sary mihetsika ary na amin'ny mozika ampiasaina aza noho ny fampiharana Garageband. Ity video ity dia mitondra antsika any ambadiky ny seho ary asehony antsika ny fomba nataon'ireo video teo aloha izy ireo dia noforonina, novaina, sarimiaina, horonantsary… miaraka amin'ny iPad Pro.
Ny zavatra tsy nohazavain'i Apple amin'ny doka, dia inona ny rindranasa nampiasain'izy ireo handraisana ireo horonan-tsary. Ny rindranasa handraketana horonantsary amin'ny iPhone sy ny iPad izay manome antsika ny fahaiza-manao betsaka indrindra dia Filmic Pro, ilay fampiharana izay nampiasain'izy ireo tamin'ireo horonan-tsary ireo. Mba hanitsiana ilay horonantsary dia nampiasaina ny fampiharana Luma Fusion, raha ho an'ny sarimiaina dia nampiasaina ny fampiharana Keynote an'i Apple.
Miaraka amin'ireo horonan-tsary ireo, Apple dia te-hanaporofo fa ny iPad Pro dia matanjaka ampy ary mahomby amin'ny fanaovana karazana asa, na dia matihanina aza. Mazava ho azy, afaka nanambara ihany koa izy ireo hoe ireo fampiharana izay ahazoana tombony betsaka amin'izany, fampiharana izay raha tsy fantatsika ny fampahalalana dia sarotra be ny mahafantatra azy, satria tsy fampiharana izay matetika ao anaty toerana ambony an'ny App Store. Ny Filmic Pro sy ny Luma Fusion dia ohatra roa mazava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Apple mizara horonantsary vaovao momba ny hoe ahoana ny fandraisam-peo amin'ny iPad Pro
Ity no fomba hifehezana ny fahitalavitra avy amin'ny HomeKit miaraka amin'ny iOS 12.2
Apple dia miasa amin'ny serivisy lalao mivantana